Shacabkii lagu xasuuqay Bariire oo la cadeeyay inaysan ahayn Argagixiso. Akhriso Dukuminti Hordhac ah. – Hornafrik Media Network
HornAfrik waxay markii ugu horaysay heshay mid ka mid ah Dukumintiyo Cadaymo ah oo loo gudbiyay Baarayaasha Dhacdada Bariire, kaasoo lagu cadaynayo in Dadka la laayay aysan ahayn Alshabaab.
Maamulka Degmadda Awdhiigle oo ay hoos tagto Bariire ayaa u cadeeyay Guddiga Baaraya Xasuuqii Bariire in Dadka halkaas lagu laalayay ay wada shaqayn la lahaayeen Maamulka, isla markanaa la wadaagi jireen Xogta ku aadan Argagixisadda. Waxayna sheegeen inaysan waxba ka jirin wararka horay loo shaaciyay oo lagu sheegay in Dadkaasi ay Alshabaab yihiin.
Maamulka Degmadda Awdhiigle waxay sidoo kale cadeeyeen in Dadka la laayay ay ka war hayeen Taliska Ciidanka Xoogga ee Bariire. Waxayna sheegeen in Jananka ugu sareeya Ciidanka halkaasi joogay uu la kulmay Beeralaydan ka hor intaan la dilin.
Cadaynta Maamulka Degmadda Awdheegle waxay muujinaysaa inaan lagu qaldamin Dadkan oo ay ka warhayeen Ciidamadda halkaasi jooga inay yihiin Shacab Beeraleey ah, Isla markaana loo bareeray in la xasuuqo. Waxaana wali socda Baaritaanka ku aadan arrintan.